Clamps ny fanorenana anankiray efa voavitrana
sary sehatra 1: 0.5 1 2 3 4 5 6
Ny savaivony ny sodina D
Ny savaivony ny Stud B
Thread halavan'ny H
Calculating ny haben'ny ny trano clamp
D - Ny savaivony ny sodina
B - Ny savaivony ny Stud
H - Thread halavan'ny
Buy Building Hardware dia tsy olana. Sales manana na inona na inona fotoana fasteners. Sodina clamps, clamps fa ny fanamboarana ny habeny sy ny toerana samihafa. Fa indraindray mba tsy hisy ny fivarotana fixture ary te hanao Clamp ny tenanao.
Ny vozon'akanjoko ahitana ny threaded Stud amin'ny voanjo sy clamping vilia. Hairpin toe-javatra eo amin'ny sodina sy ny vy savaivony Clip vonona. Ao amin'ny lovia tsindry drilled lavaka roa. Dia nitafy paingotra sy ny milina fanontam-pirinty manohitra ny sodina ho clamp. Matetika ampiasaina amin'ny fananganana fefy, izay nifatotra crossbar ny lovia.